Gobolka cusub ee Farshaxanka: Digital Comm Link's Digicaster SoloCam | NAB Show News | 2020 NAB Show Media Partner iyo Soosaaraha NAB Show LIVE. Wararka Injineerka Warbaahinta
Bogga ugu weyn » Featured » Baahinta Xaaladda Cusub ee Farshaxanka: Digital Comm Link's Digicaster SoloCam
Baahinta Xaaladda Cusub ee Farshaxanka: Digital Comm Link's Digicaster SoloCam
Digicaster SoloCam (isha: Digital Comm Link, Inc.)
Tan iyo markii ay ka mid noqotey 1995, shirkadda fadhigeedu yahay Florida ee fadhigeedu yahay Digital Comm Link, Inc. waxay safka hore kaga jirtay bixinta taageerada soosaarka wax soo saarka iyo qalabka loogu talagalay warshadaha baahinta. Kuwaas waxaa ka mid ah midabaynta, ISP, mobilada satellite gawaarida xamuulka qaada, VOIP, FTP, socodka fiidiyowga, iyo Isgaarsiinta Digicaster Transport. Waxaan dhowaan fursad u helay in aan kala hadlo Saciid Knan, Ku-xigeenka Madaxa Suuqgeynta ee Digital Comm Link, shirkadiisa iyo adeegyada kala duwan ee ay bixiso. “Waxaan bilaabay bishii Janaayo 2001 aniga oo ah xisaabiyaha,” ayuu Khan igu yiri. “Bishii Febraayo 2013, waxaan noqday kuxigeenka Suuqgeynta, iyo, bishii Abriil ee sanadkaas, waxaan kaqeyb galnay Bandhigeenii ugu horreeyay ee NAB Las Vegas oo aan la wadaagno Madalkeenna Gaadiidka Digicaster. Aniga oo ah madaxweyne ku xigeenka suuqgaynta, ujeedadaydu waa in aan gaadhsiiyo ereyga ku saabsan wax soo saarka iyo adeegyada ay shirkaddu leedahay, aniga oo tilmaamaya astaamaha ugu wanaagsan ee shirkadda, in aan il gaar ah ku eegno tartanka, isla markaana aan xoogga saaro sidii ay shirkaddu u fiicnaan lahayd. ”
Said Khan (isha: Digital Comm Link, Inc.)
Kadib Khan wuxuu si faahfaahsan uga hadlay madasha Gaadiidka Digicaster-ka ee aan soo sheegnay. “Digicaster-ka ayaa ah barxad gaadiid fiidiyoow ah oo isku mar dirta oo la soo diro HD/ Muuqaalka tayada tayada leh ee telefishanka SD laga sii daayo internet-ka dadweynaha oo ka gaabiya. Tikniyoolajiyadeena soo kabashada ee xirmada baakadaha ayaa awood u leh inay xakameyso heerarka baakadka sare ee sare baakoo aan saameyn ku yeelan tayada gudbinta. Intaa waxaa u dheer, dhammaan isgaarsiinta waxaa lagu ilaaliyaa sir xafidid milatari si loo hubiyo amniga waxyaabaha macmiilkayagu ka kooban yahay. Madalku wuxuu bixiyaa laba nooc oo gaarsiin ah, wareejin dhaqameed-ilaa-dhibic oo udhaxeysa hal il iyo hal marin, iyo qeyb-ilaa-dhibic qaybin halkaas oo isha kaliya lagu soo celinayo dhowr meelood oo isku mar ah isla mar ahaantaana xarumaha DC qeybinta. Tiknoolajiyadda soo-nooleynta baakteheena gaarka ah ayaa oggol HD baahinta fiidiyowga si loogu gudbiyo IP-ga Dadweynaha, iyadoo la adeegsanayo wareegyada internetka ee heerka ganacsiga. Ku darista algorithms-ka riixitaanka H.265 waxay sidoo kale si weyn u yareyn kartaa baaxadda ballaadhnaanta loo baahan yahay si loo fududeeyo gudbintaas. IP Encoders iyo Decoders-ka ayaa lagu soo ururiyey gudaha, waxayna si toos ah ugu xiran yihiin qaybintayada 'HUB', oo ku xiran Heerka 3 Video Switch iyo DCL ee Teleport u gaarka ah, taas oo macaamiishayada u oggolaanaysa inay gudbiyaan oo ay helaan HD/ Fiidiyowga tayada leh ee 'SD' ku sii daayo IP, fiber, iyo satellite iyada oo loo marayo hal cutub.
Khan wuxuu raacay aniga oo ii sheegaya wax soo saarkii ugu dambeeyay ee Digital Comm Link, Digicaster SoloCam. "Tikniyoolajiyadda IP-ga waxay albaabka u furtay dhowr aalado wax ku ool ah oo cusub," ayuu sharraxay, "sida 5G, 3G / 4G systems bonding, iyo KA satellite, kuwaas oo si fudud loo dejin karo loona isticmaali karo shaqaale aan farsamo ahayn. Si kastaba ha noqotee, xaaladaha badankood wali waa lagama maarmaan in la helo shaqaale kaamiro ah goobta haddii wax tabarucaad toos ah loo baahan yahay. Maaddaama tabarucyada badankood ay fudud yihiin 'wareysiga khadka hoose' wareysiyada istuudiyaha, waxa kaliya ee loo baahan yahay waa in tallaalka si sax ah loo qaabeeyo oo diiradda la saaro. Digicaster SoloCam wuxuu awood u siinayaa ka-qaybqaataha inuu dejiyo tallaalka, hagaajiyo heerarka makarafoonka, iyo inuu maareeyo IFB naftooda, isagoo u sii-deynaya shaqaalaha kaamirada si ay u soo ururiyaan wax ama ay ugu diraan shaqooyin kale. Kaabashka waa la ilaaliyaa ugu yaraan; Embedder-ka maqalka gudaha ah waxaa loola jeedaa hal fiidiyo fiidiyo ah ayaa loo isticmaalaa in lagu xiro jidka tagaya. Waxaa jira xiriir fiilo leh oo makarafoonka ah. Xakamaynta kaamerada iyo heerarka makarafoonka waxaa dejin kara tabarucayaasha. Qaadhaan-bixiyuhu wuxuu xakamayn karaa toogashada lagu hago gacanta ku haynta kumbuyuutarka fog-fog, isagoo siinaya xakamaynta heerarka digsiga / foorarsiga / zoom iyo heerarka mikro. Unugga SoloCam wuxuu ku siiyaa kontaroolka istuudiyaha marinka jadwalka websaydhka Digicaster. ”
Inta ka hartay wareysiga, Khan wuxuu sii waday inuu i siiyo macluumaad faahfaahsan oo ku saabsan adeegyada iyo wax soo saarka kale ee loo yaqaan 'Digital Comm Link', sida Colo 84, xaruntooda qeybta 5 midabaynta. “Qeybta 5aad micnaheedu waa xarunta waxay u adkeysan kartaa Bisad 5 Duufaan. Xarunteena waxay u shaqeysaa nooc ka mid ah xarumaha xogta ee kireysta meelaha qalabka iyo xawaaraha ballaadhinta shirkadaha iyo ganacsiyada u baahan bixiyaha adeegga shabakad qiimo macquul ah. Ganacsiyadu waxay ku bixin karaan xoogaa nasiib ah abuurista kaabayaal ganacsi oo gaar loo leeyahay, laakiin markay kudhacaan xarunteena midabaynta, ganacsiyadaas oo kale waxay kireysan karaan adeegyada ay u baahan yihiin iyadoon loo abuurin nidaamka isgaarsiinta laftooda. Intii aan bixinaynay kala dheellitirka serverka iyo balaadhinta balaaran, waxaa muhiim ah in la xasuusnaado in xarunteena ay leedahay matoorro fara badan, laba lugood oo awood leh, waxaanan u fidinaa bixiyeyaal badan oo internetka ah, sidaa darteed macaamiisheenu waxay leeyihiin xulashooyin.
ISP iyo adeegyada wax soo saarka ee Digital Comm Link. Waxaan nahay dib-u-iibiyaha idman ee AT&T iyo xogta iyo badeecadaha codka ee CenturyLink min 1Mbps ilaa 10Gbps wareeggeedii fiber. Waxaan ka shaqeynaa Shabakad Xarig la 'aan ka timaadno 200 oo cagood oo ah munaaradda isgaarsiinta goobta oo u adeegaysa ganacsiyada iyo bulshooyinka la deggan yahay ee ka tirsan Degmada Broward Haddii aad raadineysid adeeg joogto ah, mid kumeel gaar ah, ama adeeg kayd ah, adeegga 'Wireless service' ayaa socon kara oo soconaya maalmo gudahood halkii bilooyin laga heli lahaa. Waxaan hadda bixinaa a HD Qalabka 'ENG Kit', oo ah xirmo si gaar ah loo qaabeeyey oo isu keenaya dhammaan aaladaha wax soo saar ee aad u baahan doontid si aad uxirxirto xiritaanka wararkaaga xirfad elektaroonigga ah. Qalabka loo yaqaan 'ENG Kit' waxaa sida caadiga ah loo adeegsadaa hal-ama-ka badan oo wareysiyo qof ah, dokumentiyo dokumenti ah, bandhigyo abaalmarin ah, bandhigyo dhab ah, muuqaalada gadaashiisa, toogashada b-duub, iwm.
Satellite Tours Media (SMTs): “A satellite Socdaalka warbaahinta waa farsamo ay adeegsadaan shirkadaha, ugu horreyntii, si ay u siiyaan 'khabiir' ay doorteen baahinta wararka telefishanka maxalliga ah ee is dhexgalka inta badan nool, iyadoo ujeedadu tahay in farriin gaar ah laga helo. Satellite booqashooyinka warbaahintu waxay la xiriiraan, oo badanaa loo adeegsadaa sii deynta wararka fiidiyaha. ”
Taleefishinka satellite Adeegyada: “Telefoonkeenu wuxuu u shaqeeyaa 24/7 wuxuuna ku yaal meel istiraatiiji ah oo loogu adeego Suuqyada Mareykanka, LATAM, Caribbean, Yurub, Afrika, iyo Aasiya, iyo isku xirnaashadeena fiber-ka ilaa Heerka 3 VYVX, waxaan sidoo kale helnaa marin dheeri ah teleports iyo Video Switch. Waad ka faa'iideysan kartaa kaabayaasha casriga ee 'Digital Comm Link' ee adeegyo badan oo la maareeyay laga soo bilaabo taleefanka iyo howlaha xarunta illaa adeegga dhamaadka-ilaa-dhamaadka. Adeegyadeena la maareeyay ayaa fududeeyay satelliteisgaarsiinta ku saleysan, yaree qarashyada howlaha shabakadda, iyo gaarsiinta dabacsanaanta iyo taageerada si aad ula kulanto shuruudahaaga isbeddelaya. Markaad 'on-net' ku jirto Unugyada Digicaster IP, waxaad si habsami leh u isticmaali kartaa adeeg kasta oo laga heli karo telefishanka oo ay weheliyaan Heerka 3 Virtual Teleport iyo Video Switch. Mobilada Satellite Gawaarida waaway HD, oo awood u leh gudbinta telefishanka ee telefishanka KU iyo C-Band. Waxay sidoo kale u qalabaysan yihiin inay ku soo gudbiyaan xawaaraha internetka ee mareegaha internetka satellite haddii ay jirto xaalad degdeg ah ama meel fog.
Istuudiyaha DCL ee Davie, Florida, istuudiyaha goobta, iyo istuudiyaha kala duwan ee ku faafay waddanka: “Studio 84 waa istuudiyaha wax soosaarka oo cagtiisa gaareyso 4500 oo uu ku yaallo 20 fiit oo shabakad iftiin leh, derbi 3 CYC ah, shaashad cagaaran Istuudiyaha waa meel ceyriin ah oo loo heli karo nooc kasta oo mashruuc wax soo saar ah, iyadoo la dhigto mote ka badan 50 gaari, wuxuuna si toos ah ugu xiran yahay bartayada Teleport iyo Video Switch. Tani waxay u oggolaaneysaa baahinta tooska ah ee tooska ah ee aad ugu habboon Satellite Booqashada Warbaahinta. Istuudiyaha tifaftirka ayaa awood u leh mashaariicda yaryar, waxaanan leenahay tifatire waqti buuxa ka shaqeeya shaqaalaha. Si kastaba ha noqotee, mashaariicda aad u weyn, waxaan u helnaa xarun farshaxaneed oo casri ah oo aan sidaa uga fogeyn oo aan si toos ah ugu xiran nahay, marka waxaan awoodnaa inaan u soo dirno fiidiyowga waqtiga dhabta ah gadaal iyo afraad.
Istuudiyayaasheena toogashada tooska ah ee tooska ah ee 23-ka ah ee dalka oo dhan ka socda waa natiijada tooska ah ee Cutubkeena IP-ga Digicaster. Waxaan awoodnaa inaanu furno goobahan, kuwaas oo ay ka shidaal qaataan shabakadaha telefishanka telefishanka barnaamijyadooda wararka. Adoo ku dhejinaya Qeybta Digicaster-ka meel kasta oo leh xiriir internet, meel fog ayaa isla markiiba toos u noolaanaya, waxayna u gudbin kartaa HD Farriinta ku baahin khadka tooska ah ee IP, Satellite iyo Bedelka Fiidiyowga. Waxaan awoodnay inaan dejinno guryo iyo xafiisyo loogu talagalay ka qayb galayaasha shabakadda maalin kasta. Maaddaama kuwa badan oo tabarucayaasha ahi ay ku raaxaystaan ​​guryahooda iyo xafiisyadooda khaaska ah, waxaan horumarinnay a HD Xirmada Kaamirada PTZ oo si fudud loogu diri karo goob kasta oo si toos ah looga xakameyn karo shabakadda madaxa-dhamaadka. Tani waxay hubaal u ogolaan doontaa sawir ka fiican iyo tayada maqalka intii la dhihi lahaa gudbinta Skype. ”
Adeegyada qulqulka DCL: "Qaybaha 'Digicaster IP Units' waxay u oggolaaneysaa macaamiisha inay si isku mid ah ugu gudbiyaan durdur warbaahin shabakad ama OTT Platform, una gudbiyaan isla calaamadda HTTP, HTTPS, HLS, RTP, RTMP, RTSP durdurrada loogu talagalay daabacaadda CDN, IPTV, YouTube, iyo Facebook oo magacyo dhawr ah. Cutubyadu way wada sameyn karaan dhammaantood, HEVC / H.265, H.264 / MPEG-4AVC, iyo compressions MPEG-2, iyo sidoo kale 4K, HD, iyo SD qaraarada qaraarka, oo lagu daray IP, SDI, iyo isdhexgalka ASI. Wax kastoo mashruucu yahayba, waanu ku caawin karnaa. ”
DCL's VoIP gateway: “Hadday ahaan lahayd gudaha / caalamiga, DID-yada guud, martigalinta PBX, ama kuwa gaarka loo leeyahay FXO / FSX, Albaabbada VoIP ee DCL waxaa loogu talagalay inay si habsami leh ula dhexgalaan nidaamka Isgaarsiinta Midaysan ee Switchvox. Macaamiisha Switchvox waxay ku raaxeysan karaan isdhexgalka madal la hubo iyo qaabeynta deg degga ah inta lagu jiro howlgalka. Waxyaabaha ay ka midka yihiin helitaanka otomaatigga ah iyo wicitaanka wicitaanka, dejinta nidaamka waxaa lagu gaari karaa daqiiqado gudahood. ”
Khan wuxuu soo gabagabeeyay hadalkayaga isagoo ii sheegaya qaar ka mid ah siyaabaha uu u dhiirrigeliyo Digital Comm Link. "Waqti badan ayaan ku qaadaa internetka," ayuu yiri, "falanqaynta isbeddellada iyo baaritaanka macluumaadka si loo dejiyo qiimaha iyo qaababka cusub ee kor loogu qaado sumadda shirkadda. Waxaan sidoo kale si dhow ula shaqeeyaa VP-ga Hawlgallada si loo soo saaro alaabooyin cusub oo loogu daro astaamo cusub alaabteenna jira. Maaddaama aan nahay shirkad yar, waa inaan hal-abuur ku abuuraa anigoo raadinaya habab aan kula shaqeeyo shirkadaha kale ee adeegga bilaashka ah, sida Broadcast Beat, iyo suuqgeyntayada. Waxa kale oo aan masuul ka ahay hormarinta ganacsiga oo marwalba aan raadsado shirkado kale oo aan la shuraakoobo anigoo ku rajo weyn in aan balaadhino wax soo saarka iyo adeegyadeena aduunka. ”
2015 Udoodar Ololaha Caafimaadka Aurora / Colonie hoos bitrate Broadcast Engineer Broadcast Engineering CES2017 Caaqilada Cobalt Kaalinta Digicaster SoloCam Plaic Gaadiidka Digicaster Digital Comm Link tafatirka Graham Chapman Prmoted toEditor H264 / H265 HDR HDR / WCG HEVC HEVC / AVC immersive isovideo JCT-VC MStar NAB Show dhimista buuqa Ott SoftAtHome Waran & Fallaaro COLONIE / Chicago TV Technology UHD / 4K / HD Ultra HD Forum viarte Video Engineer Warsaw 2019-12-11
Previous: Lindsay Elizabeth Donovan waxay ku biirtay Encore Vancouver oo ah kuxigeenka madaxa iibka
Next: Captioner Live Broadcast Captioner